ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ၏ မဟာစပျစ်သီးနယ်ရာကို နင်းခြင်း - ယေရှုခရစ်တော်၏ ဗျာဒိတ်တော်
ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသကြီးသော စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းကို နင်းချေခြင်း။
ေမ ၁၉၊​ ၂၀၂၂ ဧပြီလ 30 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အားဖြင့် ထုတ်ဝေသူ
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၃ တွင် မှားယွင်းသော ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏ လှည့်ဖြားမှုကို သားရဲပုံသဏ္ဍာန်ဖြင့် ဖော်ထုတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၄ တွင်၊ သမ္မာကျမ်းစာ၏ အမှန်တရားနှင့် စစ်မှန်သော ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် ပိုမိုရှင်းလင်းသော အမြင်ရှိသော လူများ ရှိနေသည့်အချိန်ကို ယခု ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ပိုမိုရှင်းလင်းသော ရူပါရုံကြောင့်၊ ဤခရစ်ယာန်များသည် ဗာဗုလုန်၏ အရေခြုံ (အယူမှား၊ သစ္စာမဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုယ်စားပြုသည့်) ကိုလည်း တွေ့မြင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် ဤသူတော်ကောင်းကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုနိုင်စွမ်းရှိသည်။
သို့သော် အခန်းကြီး ၁၄ ၏အဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပြီးဖြစ်သည့် အဖြစ်အပျက်များကို လိုက်နာရမည့် မက်ဆေ့ချ်ကို ပြသထားသည်။ ဤတရားစကားသည် မြေကြီး၏စပျစ်နွယ်ပင် (ပျက်စီးယိုယွင်းနေသောဘာသာတရား၏အသီး) ကို ရိတ်သိမ်းပြီး ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်စပျစ်သီးပုံးထဲတွင် ဖိထားရန် ဖော်ပြသည်။ လိုအပ်သော အကြောင်းရင်းမှာ၊ လူအများစုသည် ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေသော ဘာသာရေး အဆုံးအမများ၏ အသီးအပွင့်များမှ လွတ်ကင်းကြမည် ဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းတို့အပေါ် တရားစီရင်ခြင်း မပြုပါက၊
ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ခိုင်မာသော တရားစီရင်ချက်များနှင့် ပြည့်နေသနည်း။
ဘုရားသခင်၏ ပြတ်သားသော ဗျာဒိတ်သတင်းတရား၏ တရားစီရင်ချက်များမှသာလျှင် လူတို့ကို ၎င်းတို့၏ ဇာတိပကတိ တွေးခေါ်မှုနှင့် ဆင်ခြင်တုံတရားတို့မှ လုံးဝကင်းဝေးစေနိုင်သည်။ လှည့်စားခြင်းခံရသော မုသာစိတ်နှင့် ကင်းလွတ်၍၊ စပျစ်သီးနှိပ်စီရင်ခြင်းသတင်းစကား၏ဖိအားသည် ၎င်းတို့ကို လွတ်မြောက်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ သို့သော် မှားယွင်းသောသွန်သင်ချက်များနှင့် အရေခြုံမှုကို နှစ်သက်သူများအတွက်၊ တရားစီရင်ခြင်းသည် အလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါသည်။
“အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်ဘက်မှ လာသည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်မူကား၊ တရားသူကြီးဖြစ်တော်မူ၏။ တယောက်ကို နှိမ့်ချ၍၊ အကြောင်းမူကား၊ ထာဝရဘုရား၏လက်တော်၌ ခွက်တခွက်ရှိ၍၊ စပျစ်ရည်သည် နီ၏။ အရောအနှောနှင့် ပြည့်၏။ မြေကြီးထဲက ညစ်ပတ်သောအညစ်အကြေးရှိသမျှတို့ကို စွန့်၍ သောက်ကြလိမ့်မည်။” ~ ဆာလံ ၇၅:၆-၈
ထို့ကြောင့် ဤစပျစ်သီးနယ်ခြင်းရူပါရုံက ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြသသည့်အရာမှာ အလုပ်ပြီးမြောက်ရန် ထင်ရှားသောအသင်းတော်မဟုတ်သည့်တိုင် ယိုယွင်းပျက်စီးနေသောဘာသာတရားအား ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်က အမြဲတရားစီရင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင်၊ ဘုရားသခင်၏ ဒေါသကြီးသော စီရင်ချက်များ၏ စပျစ်ရည်ပုံးထဲသို့ လျှို့ဝှက်စွာ ပစ်ချခဲ့သည်။ ဒါမှ သူများတွေ အမှားအမှန်ကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတွေကြားမှ မှန်တာကို လုပ်ပါ။ ယနေ့၊ စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုတစ်ခုမှ (အောက်ပါကျမ်းစာတွင် ကောင်းကင်တမန်တမန်များက ပုံဆောင်ထားသည့်) ဟောပြောခြင်းသည် ဗာဗုလုန်လူမျိုး (သစ္စာထက်နည်းသော) နှလုံးသားရှိသူတို့အား သမိုင်းတစ်လျှောက် အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို ယနေ့ပြသပါမည်။
“ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသော ကောင်းကင်တမန်တပါးသည် ဗိမာန်တော်မှထွက်၍ ထက်သောတံစဉ်ကိုကိုင်လျက်၊ မီးကိုလွှမ်းမိုးသော ကောင်းကင်တမန်တပါးသည် ယဇ်ပလ္လင်မှ ထွက်လာ၍၊ ထက်သောတံစဉ်ကို ကိုင်ဆောင်သောသူအား၊ သင်၏ချွန်ထက်သောတံစဉ်ကိုထိုး၍ မြေကြီး၏စပျစ်နွယ်ပင်အစုအဝေးတို့ကို စုသိမ်းလော့။ စပျစ်သီးများ မှည့်ပြီ။ ကောင်းကင်တမန်သည် မိမိတံစဉ်ကို မြေကြီးထဲသို့ ထိုး၍၊ မြေကြီး၏စပျစ်နွယ်ပင်ကို စုသိမ်း၍ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ထွက်ရာ စပျစ်သီးနယ်ရာ တွင်းထဲသို့ ချပစ်လေ၏။ မြို့ပြင်၌ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းသည် နင်းမိသဖြင့်၊ အသွေးသည် တထောင်ခြောက်ရာဖာလုံအကွာတွင် မြင်းဇက်ကြိုးများအထိ၊ ~ ဗျာဒိတ် ၁၄:၁၇-၂၀
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဧဝံဂေလိတရားကို ဦးစွာယူဆောင်လာကတည်းက စပျစ်သီးနယ်ရာကို နင်းချေခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် “၁၆၀၀ ဖာလုံ” ကျယ်ဝန်းသောနေရာအတွက် ယေရုရှလင်မြို့သစ်ဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောအသင်းတော်ဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏ထင်ရှားသောထင်ရှားသောမြို့အပြင်ဘက်တွင် ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဟေရှာယရှိ ဤကျမ်းချက်၏အကြောင်းအရာသည် ဘုရားသခင်အတွက် ထင်ရှားသောလူများကို သန့်စင်စေခြင်းနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ ဘယ်လိုလဲ? မှားယွင်းသော သွန်သင်ချက်များနှင့် မှားယွင်းသောဝတ်ပြုရေး၏ ဖောက်ပြန်ခြင်းကို နင်းချေခြင်းဖြင့်၊ မြို့၏အကူအညီမပါဘဲ (ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထင်ရှားသောဘုရားကျောင်း) ဘုရားသခင်သည်အလုပ်ပြီးမြောက်ဆဲဖြစ်သည်။
“အမျက်တော်ဖလားကို ထာဝရဘုရား၏လက်တော်၌ သောက်သော ယေရုရှလင်မြို့၊ နိုးလော့၊ နိုးလော့။ တုန်လှုပ်သောဖလား၏ အမှိုက်များကို ယစ်မူး၍ ပယ်ရှင်းတော်မူပြီ။ ဘွားမြင်သောသားအပေါင်းတို့တွင်၊ မွေးမြူထားသော သားအပေါင်းတို့၏လက်၌ လုယူသောသူတယောက်မျှမရှိ။” ~ ဟေရှာယ ၅၁:၁၇-၁၈
ဗျာဒိတ်ကျမ်းက အဘယ်ကြောင့် မြင်းဇက်ကြိုးများအထိ သွေးစီးကြောင်းကို ဖော်ပြသနည်း။
ဗျာဒိတ် ၁၄ ပါအဝတ်များပေါ်ရှိသွေးများနှင့် “မြင်းဇက်ကြိုးများအထိ” သည် တရားစီရင်ခြင်း၏ပြင်းထန်မှုကိုပြသသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဗာဗုလုန်ပြည်တန်ဆာ အမျိုးအစားဖြစ်သည့် ယေဇဗေလသည်လည်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
“ထိုမိန်းမကို ချလိုက်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထို​အ​ခါ​သူ​တို့​သည် မိ​မိ​ကို​လှဲ​ချ​ကြ​၏။-​သူ​၏​အ​သွေး​အ​ချို​့​သည် အ​ရိုး​ပေါ်​၌​ဖြန်း​လျက်​ရှိ​၏။ မြင်းများပေါ်တွင်: ပြီးတော့ သူက သူ့ကို ခြေနဲ့နင်းတယ်။" ~ ၂ ဓမ္မရာဇဝင် ၉:၃၃
အထူးသဖြင့် ဤတရားစီရင်မှုသည် မှားယွင်းသောသတင်းစကားဖြင့် လူတို့ကို ထိန်းချုပ်ရန် ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များဟုခေါ်သော အုပ်ချုပ်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှ မှားယွင်းသောသတင်းစကားဖြင့် လူများကို ထိန်းချုပ်ရန် ၎င်းတို့၏အခွင့်အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်သည့် “ခရစ်ယာန်ဘာသာ” ၏ မှားယွင်းသောတရားစီရင်ခြင်းအပေါ်တွင်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် စစ်မှန်သော အပြစ်မဲ့ခရစ်ယာန်များကို ရှုံ့ချပြီး ၎င်းတို့၏ ဆိုးသွမ်းမှုကို တရားမျှတစွာ ရှုတ်ချကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် “မြင်းသတို့သမီးများ” သို့မဟုတ် ချုပ်ကိုင်မှုအာဏာများအထိ လုံးလုံး အပြစ်ရှိကြသည်။ အပြစ်မဲ့သူတို့ကို မကောင်းပြောရန် သူတို့၏လျှာကိုအသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
“အကြင်သူသည် စကားဖြင့် မပြစ်မှားမိလျှင် ထိုသူသည် ပြီးပြည့်စုံသော၊ တစ်ကိုယ်လုံးကို ချုပ်နှောင်နိုင်၏။ သူတို့သည် ငါတို့စကားကို နားထောင်မည်အကြောင်း၊ သူတို့တကိုယ်လုံးကိုလှည့်ပတ်တယ်။ ဤမျှလောက်ကြီး၍ လေပြင်းတိုက်သော သင်္ဘောတို့သည်လည်း၊ မြို့ဝန်စာရင်း၌ ပါသမျှအတိုင်း အလွန်သေးငယ်သော ပဲ့စင်နှင့် လှည့်ပြန်ကြပြီ။ လျှာသည် အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်၍ ကြီးသောအမှုကို ဝါကြွားတတ်၏။ မီးနည်းနည်း လောင်သွားတာ ဘယ်လောက်ကြီးလဲ။ လျှာသည် မီးဖြစ်၏၊ ဒုစရိုက်လောကဖြစ်၏၊ လျှာသည် ငါတို့အင်္ဂါတို့တွင် ဖြစ်သကဲ့သို့၊ တကိုယ်လုံးကို ညစ်ညူးစေ၍၊ ငရဲမီးကို လောင်၏။ တိရစ္ဆာန်အမျိုးမျိုး၊ ငှက်၊ မြွေ၊ သမုဒ္ဒရာ၌ရှိသော အရာအမျိုးမျိုးတို့ကို အောင်နိုင်၍ လူတို့ကို အောင်နိုင်ပြီ။ သေစေတတ်သော အဆိပ်အပြည့်ဖြင့် ရမ်းကားသော မကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်၏။ ငါတို့အဘတည်းဟူသော ဘုရားသခင်ကို ကောင်းကြီးပေးကြလော့။ ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဌာန်အတိုင်း ဖန်ဆင်းသော ငါတို့သည် ထိုလူတို့ကို ကျိန်ဆဲကြ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့် ကျိန်ဆဲခြင်းကို ခံရတတ်၏။ ငါ့ညီအစ်ကိုတို့၊ ဤအရာများသည် မဖြစ်သင့်ပေ။” ~ ယာကုပ် ၃:၂-၁၀
အပြစ်မဲ့သူများကို အပြစ်တင်ရန် မှားယွင်းသောလျှာကို အသုံးပြုသည့် ဝိညာဉ်ရေးသစ္စာမဲ့မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဘုရားသခင်၏ ဒေါသအမျက်တော်ထွက်သည့် ဤတူညီသောပုံစံကို ကျမ်းချက်များစွာက ဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းသည် ယေရှု၏နှုတ်ကပါဌ်တော်သည် လျှို့ဝှက်ခြင်းအပေါ် ကိုယ်တိုင်တရားစီရင်သည့် ဝိညာဉ်ရေးနေရာဖြစ်သည်။
“ထာဝရဘုရားသည် ငါ့အလယ်၌ ငါ့အားကြီးသော သူရဲအပေါင်းတို့ကို ခြေဖြင့်နင်းတော်မူပြီ။ ငါ့လူပျိုတို့ကို နှိပ်စက်စေခြင်းငှါ၊ ထာဝရဘုရားသည် စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်း၌ ရှိသကဲ့သို့၊ ယုဒသတို့သမီးကညာကို နင်းတော်မူပြီ။ ~ မြည်တမ်းစကား ၁:၁၅
ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​၏​စ​ပျစ်​ခြံ​ကို​မ​ထိန်း​ကျောင်း​သော မိ​မိ​သိုး​ထိန်း​တို့​ကြောင့်​ဘု​ရား​သ​ခင်​သည်​လည်း​ထို​သူ​တို့​ကို​အ​ပြစ်​ပေး​တော်​မူ​လိမ့်​မည်။ သခင်ယေရှုက တပည့်တော်များကို ဤသို့ပြောခဲ့သည်။
“ထို့ကြောင့် စပျစ်ဥယျာဉ်သခင် ကြွလာသောအခါ၊ သူ​တို့​က၊ ထို​လူ​ဆိုး​တို့​ကို စိတ်​ဆင်းရဲ​စွာ​ဖျက်​ဆီး​လိမ့်​မည်၊ သူ​၏​စ​ပျစ်​ခြံ​ကို အ​ခြား​လယ်​ယာ​သူ​တို့​အား ပေး​တော်​မူ​လိမ့်​မည်။ ~ မဿဲ ၂၁:၄၀-၄၁
လူဆိုးတို့၏စပျစ်နွယ်ပင်ကို တရားစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာ နောက်ထပ်ဖော်ပြချက်တွင် တရားဟောရာကျမ်းတွင် အလားတူကြေငြာချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ သူတို့စပျစ်နွယ်ပင်သည် သောဒုံမြို့၏စပျစ်နွယ်ပင်၊ ဂေါမောရမြို့လယ်ပြင်မှဖြစ်ပြီး၊ စပျစ်သီးသည် သည်းခြေစပျစ်သီးဖြစ်ပြီး၊ အပြွတ်များသည် ခါးသည်၊ သူတို့၏စပျစ်ရည်သည် နဂါး၏အဆိပ်ဖြစ်ပြီး၊ ကြမ်းကြုတ်သောမြွေဆိုး၏အဆိပ်ဖြစ်သည်။ ~ တရားဟောရာ ၃၂:၃၂-၃၃
ဝိညာဏဗာဗုလုန်သည် အပြစ်ရှိကြောင်းနှင့် ဤစီရင်ချက်နှင့် ထိုက်တန်သည်ဟု အတိအကျအမည်တပ်ထားသည်။
“အကြောင်းမူကား၊ လူမျိုးအပေါင်းတို့သည် မတရားသောမေထုန်၏ ဒေါသအမျက်စပျစ်ဝိုင်ကို သောက်ကြပြီ။ မြေကြီးပေါ်ရှိ ရှင်ဘုရင်တို့သည် သူနှင့်မတရားမေထုန်ပြုကြပြီ။ ~ ဗျာဒိတ် ၁၈:၃
ဓမ္မဟောင်း ပရောဖက်ပြုချက်များသည်လည်း ယင်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
“ဗာဗုလုန်မြို့ထဲက ပြေးကြလော့။ လူတိုင်း မိမိအသက်ကို ကယ်နှုတ်ကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ ဤအချိန်ကား၊ အကြင်သူသည် သူ့အား ဆပ်ပေးလိမ့်မည်။ မြေကြီးတပြင်လုံး ယစ်မူးစေသော ရွှေခွက်သည် ဗာဗုလုန်မြို့ဖြစ်ပါ၏။ လူမျိုးတို့သည် မိမိစပျစ်ရည်ကို သောက်ကြပြီ။ ထို့ကြောင့် လူမျိုးတို့သည် ရူးသွပ်ကြသည်။ ~ ယေရမိ ၅၁:၆-၇
မြို့မပါဘဲ 1600 ဖာလုံအကွာတွင် စပျစ်သီးနယ်ခြင်းရှိရာ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဘာကိုဆိုလိုသနည်း။
ဧဝံဂေလိတရားစီရင်ခြင်းကို ဘုရားသခင်၏ထင်ရှားသောမြို့၊ ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောဝိညာဉ်ရေးအသင်းတော်မှ ပိုမိုရှင်းလင်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် စစ်မှန်သောထင်ရှားကျော်ကြားသောမြို့တစ်မြို့၏ရှုထောင့်မှကြည့်လျှင် “၁၆၀၀ ဖာလုံ” မြို့ (ထင်ရှားထင်ရှားသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းမရှိလျှင်ပင်) တရားစီရင်ခြင်းကို ပြီးမြောက်အောင်မြင်ဆဲဖြစ်ကြောင်း ရှုမြင်နိုင်သည်။
စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းကို ငါတစ်ယောက်တည်း နင်းမိပြီ။ ငါနှင့်အတူရှိသောလူတို့တွင် တယောက်မျှမရှိ၊ ငါသည် အမျက်ထွက်၍ သူတို့ကိုနင်း၍၊ သူတို့အသွေးသည် ငါ့အဝတ်ပေါ်မှာ ဖြန်း၍ ငါ့အဝတ်ရှိသမျှကို စွန်းထင်းစေမည်။ ~ ဟေရှာယ ၆၃:၃
ဤ ၁၆၀၀ ဖာလုံသည် အချိန်ကိုကိုယ်စားပြုပြီး လျှော်တေအဝတ်နှင့်ပြာများကိုဝတ်ကာ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်ပရောဖက်ပြုသည့်နှစ်ပေါင်း ၁၂၆၀ ပါဝင်သည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၁:၃ နှင့် ၁၂:၆ ကိုကြည့်ပါ) ၎င်းသည် ရာစုနှစ်သုံးစုခွဲနီးပါးနီးသည့် ပရိုတက်စတင့်ခေတ်နှစ်ခုကို အကျုံးဝင်သည်။
အစကတည်းက Smyrna အဆုံးအထိ သာဒိ (ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား၏အစ) : နှစ်ပေါင်း 1260 နှင့်3ရာစုနှစ်ခွဲခန့်သည် နှစ် 1600 ဝန်းကျင်နှင့်ညီမျှသည်။ သမိုင်းမှာ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာ AD 270 သို့မဟုတ် 280 ဝန်းကျင် 1880 ဝန်းကျင်အထိ. ဤရက်စွဲများသည် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း ထိုနှစ် 1600 ကာလကို အနီးကပ်ထင်ဟပ်ပါသည်။
အာရှရှိ အသင်းတော်ခုနစ်ပါး၏ အချိန်ဇယားကို နားလည်သူများသည် ထင်ရှားပေါ်လွင်သော (အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းမှကင်းစင်သော) အသင်းတော်မရှိသည့်အချိန်ကာလကို နားလည်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအချိန်အတောအတွင်း ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ရှိစပျစ်သီးကို နင်းနယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဘုရားကျောင်း7ခု၏မြေပုံပေါ်တွင် 1600 ဖာလုံ
1600 ဖာလုံ/နှစ်အပေါ် ထပ်လောင်းရှင်းလင်းချက်အတွက်- ဗျာဒိတ်ကျမ်းပထမအကြိမ်ရေးသားချိန်တွင် အာရှတိုက်ရှိအသင်းတော်ခုနစ်ခု တည်ရှိရာနေရာကို မြေပုံကိုဆွဲယူပါက ၎င်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နီးကပ်စွာတည်ရှိနေသည်ကို သင်တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အာရှမိုင်းနားတွင် ဆင့်ကဲပုံစံ (၎င်းတို့သည် ယနေ့ခေတ်တူရကီတွင် တည်ရှိနေပေလိမ့်မည်။)
ဤသည်မှာ ဘုရားကျောင်း ခုနစ်ခုတည်ရှိရာ မြေပုံဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်၏နည်းလမ်းတော်သည် ၎င်းတို့အား ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မှတစ်ဆင့် တရားစီရင်ခြင်းကို ဦးစွာရရှိရန် တရားဟောဆရာကို မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ထို့နောက် ဤဒေါသကြီးသောသတိပေးချက်ကို လိုက်နာပြီး ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမျက်ဒေါသကို နောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် အဆုံးစီရင်သည်။
“ဣသရေလအမျိုး၏ ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဤဒေါသအမျက်ထွက်သော စပျစ်ရည်ခွက်ကို ငါ့လက်၌ယူ၍ ငါစေလွှတ်သော လူမျိုးအပေါင်းတို့ကို သောက်စေ။ ငါပေးလိုက်သောဓားကြောင့် သူတို့သည် သောက်၍ တုန်လှုပ်ခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ ခွက်​ကို​ယူ၍ ထာ​ဝ​ရ​ဘု​ရား​စေ​လွှတ်​တော်​မူ​သော​လူ​မျိုး​အ​ပေါင်း​တို့​ကို သောက်​စေ​တော်​မူ​၏။- ယေ​ရ​မိ 25:15-17
ဒီတော့ သားရဲနဲ့တူတဲ့ ဗာဗုလုန်ဘာသာတရားရဲ့ သစ္စာမဲ့မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့ တရားစီရင်မှုနဲ့ ငါတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ငါတို့ကို ရူးသွပ်စေသလား။ သို့တည်းမဟုတ် ယင်းက ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကို မှန်ကန်စေပြီး နောင်လာမည့်အမျက်ဒေါသမှ ပြေးလာစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ “ဗာဗုလုန်မြို့မှ” ထွက်လာကြသေးသလား။
အမျိုးအစားများ ၇ ကြိမ်မြောက်တံပိုး, မှားယွင်းသောစီရင်ချက်များ, ဗျာဒိတ်ကျမ်း _၁၄, ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီး တဂ် 1260 ရက်, ခါး, သွေး, သစ္စာရှိသက်သေ, ပြည့်တန်ဆာ, အရေခြုံ, တရားစီရင်ခြင်း။, အမျက်ဒေါသ ပို့စ်ညွှန်း
ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ နောက်ဆုံးဘေးဒဏ် ခုနစ်ပါးနှင့် ကောင်းကင်တမန် ခုနစ်ပါး